SUSA IIADWARE KUNYE NEEPAP-UP KWIINTENGISO ZESIKHANGELI SEWEBHU - ITHAMBILE
Susa iiAdware kunye neePap-up kwiintengiso zesikhangeli sewebhu
Eyona ngxaki ixhaphakileyo abajongana nayo ngabasebenzisi beWindows ngelixa bebrawuza i-intanethi kukuba isikhangeli sabo sewebhu sithunyelwe kwiindawo ezingafunekiyo okanye kwiintengiso ezingalindelekanga. Oku kuhlala kubangelwa ziinkqubo ezingafunekiyo (PUPs) ezikhutshelwa ngokuzenzekelayo kwi-Intanethi ngokudibeneyo nenkqubo efunwa ngumsebenzisi. Ikhompyuter isulelwa yinkqubo ye-adware ongenakukuyikhupha ngokulula. Nokuba ungazikhipha kwiNkqubo kunye neeMpawu, ziya kuqhubeka nokusebenza ngokwesiqhelo ngaphandle kwemicimbi.
windows imodyuli yokusetyenziswa kwediski
Le adware ikwacothisa ikhompyuter yakho kwaye izame ukosulela iPC yakho ngentsholongwane okanye i-malware ngamanye amaxesha. Awuyi kuba nakho ukukhangela ngokufanelekileyo i-intanethi njengoko ezi ntengiso ziya kugqume umxholo kwiphepha, kwaye nanini na xa ucofa kwikhonkco intengiso entsha ezakuvezwa iya kubonakala. Ngamafutshane, konke oza kubona kukungafani kwentengiso endaweni yomxholo ofuna ukuwubona kwangaphambili.
Uya kujongana neengxaki ezinje ngombhalo ongacwangciswanga okanye amakhonkco aya kuguqulwa abe zii-hyperlink zeenkampani zentengiso, isikhangeli siza kuncoma uhlaziyo olungelulo, ezinye ii-PUps ziya kufakelwa ngaphandle kwemvume yakho njlnjl.ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha masibone ukuba uyisusa njani iAdware kunye nePop-up Iintengiso ezivela kwisikhangeli sewebhu ngoncedo lwesikhokelo esinezi ngxaki zingezantsi.
Indlela yoku-1: Khipha iiNkqubo ezingafunekiyo kwiNkqubo kunye neeMpawu
Indlela yesi-2: Sebenzisa i-AdwCleaner ukuze ususe iiAdware kunye neePap-up
Indlela yesi-3: Sebenzisa ii-Malwarebyte ukuSusa iziKhangeli zeKhangeli
Indlela ye-4: Sebenzisa iHitmanPro ukususa iiTrojans kunye neMalware
Indlela yesi-5: Khubaza iiPop-Ups kwiGoogle Chrome
Indlela yesi-6: Cwangcisa kwakhona isiKhangeli seWebhu ukuba siSete ngokungagqibekanga
1. Cinezela iWindows Key + R emva koko uchwetheze imvuc.cpl kwaye ubetha u-Enter ukuvula iNkqubo kunye neeMpawu.
2.Yiya kuluhlu lweenkqubo kwaye ukhiphe nayiphi na inkqubo engafunekiyo.
3. Ngezantsi zezinye zeenkqubo eziqhelekileyo eziyaziwayo:
Browsers_Apps_Pro CheckMeUp Cinema Plus CloudScout Parental Control HD-V2.2 Desktop Temperature Monitor Dns Unlocker HostSecurePlugin MediaVideosPlayers New Player Network System Driver Pic Enhance PriceLEess Price Minus Save Daily Deals Savefier Savepass SalesPlus Salus Sm23mS SS8 Word Proser
4. Ukukhupha nayiphi na kwezi nkqubo zidweliswe apha ngasentla, cofa ekunene kwinkqubo kwaye ukhethe Khipha.
5. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
1. Khuphela iAdwCleaner kolu nxibelelwano .
2. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, cofa kabini kwifayile ye ifayile ye-adwcleaner.exe ukuqhuba inkqubo.
3. Cofa apha Ndiyavuma iqhosha ukuya yamkela isivumelwano selayisensi.
4. Kwiskrini esilandelayo, klikha kwiqhosha Skena iqhosha phantsi kweZenzo.
5. Ngoku, linda iAdwCleaner ukuba ifune I-PUPs kunye nezinye iinkqubo ezinobungozi.
6. Nje ukuba ukuskena kugqitywe, cofa Ucocekile ukucoca inkqubo yakho yeefayile.
7. Gcina nawuphi na umsebenzi onokuthi uwenze njengoko iPC yakho iza kudinga ukuqalisa kwakhona, cofa u-OK ukuqala kwakhona iPC yakho.
Nje ukuba ikhompyutha iqale ngokutsha, kuya kuvulwa ifayile yelog, eya kuthi idwelise zonke iifayile, iifolda, izitshixo zerejistri, njl. Njl. Ezazisuswe kwinyathelo elidlulileyo.
I-Malwarebyte siskena esinamandla sokufuna ekufuneka sisuse izigebenga zebrawuza, i-adware kunye nezinye iintlobo ze-malware kwi-PC yakho. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ii-Malwarebyte ziya kusebenza ecaleni kwesoftware ye-antivirus ngaphandle kwengxabano. Ukufaka nokuqhuba ii-Malwarebytes Anti-Malware, yiya kweli nqaku kwaye ulandele onke amanyathelo.
1. Khuphela iHitmanPro kolu nxibelelwano .
2. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, cofa kabini ifayile ye hitmanpro.exe ukuqhuba inkqubo.
3. IHitmanPro iya kuvula, cofa u-Okulandelayo ku Skena isoftware enobungozi.
4. Ngoku, linda uHitmanPro akhangele ITrojans kunye neMalware kwiPC yakho.
5. Nje ukuba ukuskena kugqitywe, cofa indawo ethi Iqhosha elilandelayo ukuya susa i-malware kwi-PC yakho.
6. Kufuneka Sebenzisa iphepha-mvume lasimahla phambi kokuba ube nako susa iifayile ezinobungozi kwikhompyuter yakho.
7. Ukwenza oku, cofa apha Sebenzisa ilayisensi yasimahla, kwaye ulungile ukuhamba.
8. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
1. Vula iChannel emva koko ukucofa kumachaphaza amathathu kwikona ephezulu ngasekunene.
2. Ukusuka kwimenyu evula ukucofa kuyo Useto.
3. Skrolela ezantsi, emva koko ucofe ku Phambili.
4. Phantsi kwecandelo labucala cofa u Useto lomxholo.
5.Ukusuka kuluhlu cofa ku Ezivelelayo emva koko qinisekisa ukuba Ukutshintsha kusetelwe ukuVimba (kucetyiswa).
6. Qala kabusha i-Chrome ukugcina utshintsho.
1. Vula iGoogle Chrome emva koko ucofe amachaphaza amathathu kwikona ephezulu ngasekunene kwaye ucofe kuyo Useto.
2. Ngoku kwizakhelo ze uskrole ezantsi kwaye ucofe u-Advanced emazantsi.
3. Phinda uskrolele ezantsi kwaye ucofe ku Cwangcisa kwakhona ikholamu.
uxhulumaniso olungalunganga luphelelwe lixesha chrome
4. Oku kuyakuvula iwindow pop kwakhona ukubuza ukuba uyafuna ukuseta kwakhona, cofa apha Misela kwakhona ukuze uqhubeke.
Khipha ngokupheleleyo iNorton Windows 10
Uyifaka njani iNcedisi kaGoogle Windows 10
Khubaza i-Touchpad ngokuzenzekelayo xa iMouse ixhunyiwe
Uyikhupha njani ngokupheleleyo iMcAfee Windows 10
Yiloo nto uphumelele Susa iiAdware kunye neePap-up kwiintengiso zesikhangeli sewebhu ngaphakathi Windows 10 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
windows iiwindows 10 zonxibelelwano ngaphandle kwamacingo
Imakrofoni iyeka ukusebenza windows 10
intanethi ngokungacwangciswanga ivula iiwindows 10
ukuzoba njani elizwini
cima iifayile zetempile windows 8.1
windows 10 iyaqhubeka nokuhlaziya kunye nokusilela